कहिल्यै प्रयोग नगर्नु अरुको यी ६ चिज ! भाग्यनाश र धनहानि हुन्छ ! – Online Khabar 24
कहिल्यै प्रयोग नगर्नु अरुको यी ६ चिज ! भाग्यनाश र धनहानि हुन्छ !
हरेक मानिसको आफ्नै शक्ति हुन्छ, जुन आफ्नै वरिपरि रहने र हामीद्धारा प्रयोग गरिएको वस्तुलाई पनि प्रभावित गर्छ ।
यस्तो अवस्थामा अरुको चिज प्रयोग गर्नु आफ्नो लागि दुर्भाग्य र आर्थिक समस्याको कारण बन्न सक्छ ।
यदि कुनै पनि व्यक्तिले अरुको चीज आफ्नो साथमा राख्छ भने उसको सारा नकारात्मक–सकारात्मक शक्ति ऊसँगै जान्छ, जसले लियो । के–के हुन् ति चिज ?
मनि माइन्डेड अर्थात पैसालाई मात्र महत्व दिने: आफ्नो श्रीमानले सधैं पैसा मात्रै कमाओस् भन्ने सोंच भएका महिलाहरुले हरेक पुरुषलाई पैसा कमाउने मेशिनबाहेक अरु केही ठान्दैनन् । दाम्पत्य जीवनमा पैसाले प्रेम, समर्पण र बफादारिताको ठाँउ लिएपछि आत्मीयता भन्ने कुरा हराउछ। पैसाप्रति मात्रै आशक्ति राख्ने आफ्नो पतिको मात्रै होइन आफ्नै जीवन पनि निकै निरस बनाउँछन् । यो खबर साभार गरियको हो ।
Prevघरबाट यी ६ पुराना चिज तुरुन्त हटाउनुहोस् : अशुभः हुन्छ ,भाग्यनाश हुन्छ !
nextऋणबाट मुक्त हुन घरको यो स्थानमा राख्नुहोस मयुरको प्वाँख !